Home » Akụkọ Mgbasa Ozi Omenala » Nke a Hawaii ụgbọ okporo ígwè na nkewa maka njem nleta na obodo, na ga-anabata gị aloha!
Na Island nke Oahu, County nke Honolulu, Hawaii, ọrụ ụgbọ okporo ígwè kachasị ọnụ nke ọ bụla ewu na United States nwere ike ifu ihe ruru $ 11.4B.
Ewu malitere na 2005. Ebe a na-eru kilomita iri abụọ na ise +, ọdụ ụgbọelu 20-agaghị agbasa kpamkpam ruo mgbe 21.
Traingbọ oloko ọzọ dị na Honolulu na-arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ iri afọ ijikọ Ewa na Barbers Point na Kapolei na mpaghara ọhụụ ọhụrụ nke Koolina nke gụnyere Ihilani Resort na Spa nke JW Marriott na Aulani, Disney na spa. Ọ bụ enweghị ọrụ na enweghị onye na-akwụ ụtụ isi, mana ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịgba ịnyịnya, agbanyeghị, ọ nweghị onye ga-agwa ndị obodo ma ọ bụ ndị njem nleta banyere ya.
Ọrụ Honolulu Rail nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe ruru ijeri $ 11.4 ma were ruo 2031 iji mepee maka ọrụ zuru oke. Nke ahụ dị ka akwụkwọ ezigara na Fraịde, Machị 12, 2021, site n'aka Honolulu Authority for Rapid Transit (HART).
Traingbọ oloko Hawaii dị na Ewa n'obodo Kapolei na westside nke agwaetiti Oahu, nke a maara dị ka Hawaiian Railway Society bụ ụzọ dị nkenke ụkwụ atọ dị warawara dị na Ewa, Hawaii, USA, na agwaetiti Oahu. Ọ nwere 3 kilomita nke egwu ma jikwaa iji weghachi 15 + kilomita nke okporo ígwè na-enweghị ego ọhaneze.
N'agbanyeghị ọgwụ mgbochi COVID ndị njem India na-achọ ebe nchekwa ụlọ